Hogaanka booliska DDS oo tababar u socday loo soo gabagabeeyey. - Hargeele - Wararka Somali State
Hogaanka booliska DDS oo tababar u socday loo soo gabagabeeyey.
September 9, 2019 97
Hogaaminta booliska deegaanka soomalida ayaa loo soo gabagabeeyay tababar muddo shan maalmood ah u socday, kaasi oo intii uu socday hogaaminta booliska ku qaadanayeen casharo la xidhiidha, Ilaalinta xuquuqul iinsaanka, doorka la jaanqaadka booliska isbadalka dalka ka hana qaaday, Kobcinta garaadka aqooneed ee sharciga iyo awooda fulineed ee hogaaminta booliska DDS.
Waxaana soo xidhitaankii tababarkan ka soo qaybgalay hogaanka nabadgalyada maamulka iyo cadaalada DDS mudane Cabdicaadil Xasan oo ka warbixiyay dadaalka ay xukuumada DDS ugu jirto taabagalinta nabadgalyo waarta iyo dimuqoraadiyad buuxa. Hogaanka ayaa sheegay in ahmiyada iyo ujeedooyinka tababarku ahayd sidii fahan buuxa looga siin lahaa hogaaminta ciidanka booliska DDS Xuquuqaha Aadamaha, Isticmaalka Awooda, Kobcinta garaadka Aqooneed ee Anshax Xirfadeed, fahanka Isbadalka ka hana qaaday dalka, Nidaam siyaasadeedka Faderalismka, Caqabadaha & Xalka, Nidaamka ka qayb galinta Bulahada iyo ka hortaga Dambiga
Munaasabad lagu soo dhawaynayey sanadka cusub oo Harar ka dhacdey.
Judge rules Somali man living in Maine detained for illegal stimulant can stay in US – WGME
Xukuumadda Deegaanka oo si rasmi ah u dalbatay in sixitaan lagu sameeyo tirada soomaalida u matasha Golaha wakiilada shacabka dalka.
Faarax Jaamac Yuusuf (faaraxow) oo maanta wareysi siiyay SRTV.
Kulan lagu soo dhawaynayey bilada nabada aduunka ee uu soo qaaday dr Abiy Axmed oo ka dhacay jigjiga.